Madaxweyne Muse Biixi Cabdi garnaqsiggiisu waa sax!!!
Sunday 17th November 2019 13:23:55 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Hogaamiyaha Qaranka Mudane Muse Biixi Cabdi horta waa hoggaamiye aan la xaman oo dhaba,
amuuraha aan ku taageeray waxaa ka midda taasi, waayo dalkani waxuu u baahanyahay nin ay sidda cadceedda ugu cadahay halka Somaliland laggu waddo.
Mucaaridka iyo Muxaafidka mid weliba dalkiisa xaquuq asaasiya ayuu ku leeyahay, oo ay tahay had iyo jeer inuu hello muwaadinku.
Dalkunna mid taasi la midda ayuu Muwaadinka ku leeyahay,oo ah daacadnimo iyo difaac geesinimo ku dhaahantahay, Madaxweynaha Qaranku taasi wuu leeyahay oo iminka baran mayno, oo ninkii Ummadda aanu ugga xullay dhamaan Siyaasigga Qarannigga ayuu ahaa.
Waxaa hubaalla in aan awoodahii dowligga ahaa ee "check and Balance" siddii looggu tallo gallay u shaqayn.
Awoodaha dowliggaa ee isdheelitiraaya, ee ay ka mid tahay kuwa hoos ku qoran.
3- Iyo Garsoorka,
Aniggoo ka duullaaya hadalkii Madaxweynaha, ee muranka Xubnaha Komishinka, runtii kalsooni weyn iyo dareen Qarannimo ayuu Madaxweyne Muse Biixi ka muujiyey amuurta, waxaannu sheeggay inay Gollaha Wakiilladda u taallo, wakhti aannay weli halkaa teggin.
Gollahah Wakiilladdu waa haayad Madax-bannaan, oo waxii Madaxweynaha khalad iyo ismoodsiin ku soo dhaafa inay joojiyaan, oo siddii Xaalladdii degdegga ahayd, ee Ceerigaabo ay awoodoodda dastuuriggaa isticimaallaan.
May dhicin taasi, ee wax ayaa lays dhaafsadday, oo heshiis ayaa dhacay Guurtidda iyo Baarlamaanka dhexmaray, oo ku dhisnaa ansixiya Cabdirashiid Riyoraac, idinna sadex sanno qaata.
Halka Madaxweyne Muse Biixi Cabdi Baarlamaanka uu iskagga riixey eedda waa halkaa. Madaxweynahu wuu ku saxanyahay ciddii ay ahayd innay Qaranka ugu addeeggaan daacadnimo iyo masuulnimo weyn, ayaa Gollayaashii sharcigga dhexdiisa wax ku kala dhex dillaalaaya maanta, oo shacabka reer Somaliland aanu kaba war ahayn runtii.
Gollaha sharcidejinta ee Baarlamaanka iyo Guurtidda ayaa ka masuulla xaalladda adag ee dalku gallay maanta, ayaa tuurta ku qaaddan doonna sharcijiidhka, duusigga muwaadinka xallaashaa iyo eexda Gollayaasha dhexdoodda oo aan ahayn mid Qarankan dhaqi karta runtii.
Gollaha Baarlamaanku waxuu geedka u fadhiyaa oo u doonyeysanyahay laba ama sadex sanno oo ahaa heshiiskii Cabdirashiid Riyoraac ku gudbey ama laggu ansixiyey.
Anigga Abdirashiid Riyoraac waa inaadeerkay, laakiin hawlaha Qaranka, Ummaddu waxay wadda leedahay iyo sharciggu ilmaadeer ma yaqaanno, ee waa in daacad lagga noqdaa, oo layska ilaaliyaa margashadda iyo murkacashadda had iyo jeer siyaasiggaa.
Qarannimo laguma dhisi karo xin, xaasid iyo xifaaltan, rag ayaa qabiilo innay dagaal kula jiraan u arka. Haddii aad dafirto halka muwaadinka kale Qarannimadda ka kulaalaayo, Qarannimo jiri mayso, waxaanna imannaaya murkacasho iyo mergasho weyn oo saligga dowliggaa ciidaysa.
Gollayaasha sharcidejintu waa ku murkucdeen, oo ku merggaddeen geedi-socodkii Hawlaha Qaranka iyo illaalinta sharciyadda dalka, waxayna hawlahii shanta sanno ee qudha loo doortay u isticimaalleen eex, hunguri iyo isku dil ummadda.
Waayo, amuurtu markay Madaxweyne Muse Biixi soo dhaaftay olole kale ayey gashay iyo heshiisyo aan ahayn in sharcigga Qaranka laggu jebiyo.
Laba sanno ama sadex sanno ayaa looggu ballanqaadday, taasi ayaa keentay in sharciggii iyo qayladdii shacabka laba arki waayo, oo layska xalaashaddo waxii sharcigga dalku go,aamiyey.
Had iyo jeer waxaa la eeggaa falcelinta Ummadda, waxii murkucasho iyo mergesho ku jirto, dib ayaa loogga joogsaddaa, si aan danta guud iyo geedi-socodka Qaranka nabaro u gaadhin.
Madaxweynaha Qaranka aad ayaan u taageeraa, oo danta Qaranka ayaanu ku wadda soconnaa, saaxiib ayaannu nahay oo runtii rag hortii ayaan taageeray, oo saaxiibaddayddii Xukumaddii Ahmed Siilaanyo aan idhi waad khaldantahiin, isla markaasinna aan si toosa garab iyo gaashaan u siiyey Madaxweyne Muse Biixi.
Hawsha Qaranka intuu hayo waannu wadda soconnaa, oo taageero weyn ayaan u hayaa, laakiin sharci markay tagto iyo xagal daacinta Xukumaddiisa fikirkayga iyo aragtiddayda sharcigga la xidhiidha ayaan ka leeyahay had iyo jeer, oo si xora uga fal-celinnayaa.
Dhinaca kale Asxaabta Mucaaridka saaxiibo, tol iyo xididba waannu nahay, Qaran ayaannu nahay midda. Siyaasiyan waa la dagaalamaa, laakiin lafta ma jebiyo caddowna uma aqaaanno sidda ragga qaarkiis.
Waxaannu ku hirdamaynaa waa Xisbinimadda iyo difaacashadda hoggaanka Madaxweyne Muse Biixi Cabdi oo hawshii Qaranku u doortay muddo xilleedkiisii ku jira.
Sidda ragga qaar sokeeyaha ma tuso xinniinyahayga, umanna aqaanno caddow, ee waa ii Dugsi iyo deyr xayndaabka Qaran dhankoodda buuxiyey ama qotoma, oo aan lagga maari-karin doorkoodda, haddii aad ugu liicdanna xaaraantahay.
Ma jirto asbaabo Xukumadda Madaxweyne Muse Biixi Cabdi loo mariyo xumaan weyn, isla markaanna loo abuuro muran iyo isqabsi weyn.
Nin qaloocanni wuu ku lumiyaa ayaa la yidhee, qaabka rag wax u waddo maaha mid danta Qaranka iyo waddajirkeennu ku jirto runtii, waanna in dib loogga joogsaddaa, oo xal waara lagga gaadhaa amuuraha laysku hayo.
Madaxweynahu wuu iska leexiyey eedda, waxaanna u marageedda hadalkii uu jeediyey intii aannay Xubnahu Gollaha Baarlamaanka horteggin, ee mucaaridka ugu muujiyey kalsoonidda weyn.
Markaa sheekaddu waxay u egtahay middii Madaxweyne Ahmed Siilaanyo ka badbaadey, ee Inqilaabka aan dhiiggu ku daaddan ahayd.
Waar bahasha Siyaasadda haddii aad akhriyi kari weydo, oo nin liita waxa uurkiisa ku jira aad la soo bixi kari weydo, waa laggaa hoos dusayaa.
Garnaqsigga Madaxweyne Muse Biixi ee ku dhisan qaabka wax u dhaceen, waa runtii, oo eed malaha, sababtoo ah, Baarlamaanka ayey ahayd inay siddii middii ceerigaabo u diiddaan waxii aan sharci ahayn ama Ummaddu isla ogollaan.
Inqilaab, isqabsi iyo dal burburinna meesha kama baydhna runtii, oo ninba si u feker.
dal midda iyo dad midda ayeynu u baahanahay, anaggu xukumad ahaan in aannu wax baddan ka tagno weeye, maadaama aannu waxii Ummadda gacanta ku hayno.
In qabyaallad laggu ololeeyo ama wax laggu ansixiyo Gollayaasha Xukumadda iyo Waddani midna ka yeelli mayno runtii, oo waa xaaraan.
Samafe Cabdimaalik Muuse Coldoon Oo Gabiley Si Balaadhan Loogu Soo Dhaweeyay [ Muuqaal ]